सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको ३५% हकप्रद भर्ने आज अन्तिम दिन, कहाँ जाने भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको ३५% हकप्रद भर्ने आज अन्तिम दिन, कहाँ जाने भर्न ?
काठमाडौं - सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको ३५% हकप्रद भर्ने आइतबार अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले १०ः३.५ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको २२ लाख ४४ हजार ९७३.५० कित्ता सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । यो हकप्रद असार १७ गतेदेखि साउन २० सम्मको खुल्ला गरेको हो । यो हकप्रदमा वैशाख ३१ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले मात्र हकप्रद भर्न पाउनेछन् ।
यसमा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरी काठमाडौं तथा एनएमबि बैंकका अधिकांश शाखाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी, गुडविल फाइनान्सको हात्तिसार, डिल्लीबजार, इन्द्रचोक र कुमारीपाटी शाखा तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्वा सेवामा सहभागी वित्तीय संस्थाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
सेन्ट्रल फाइनान्सको कुपण्डोल र चाबहिल शाखा तथा कामना सेवा विकास बैंक, ज्ञानेश्वर काठमाडौंबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । हाल सिद्धार्थको चुक्ता पुँजी ६४ करोड १४ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ । हकप्रद बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी ८६ करोड ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।